Iza moa izahay? > Mino ny WKG > Ny Kristiana
Izay rehetra mametraka ny fitokisany amin’i Kristy dia kristiana. Miaraka amin’ny fanavaozan’ny Fanahy Masina, ny Kristiana dia miaina fahateraham-baovao ary entina amin’ny fifandraisana tsara amin’Andriamanitra sy ny mpiara-belona aminy amin’ny alalan’ny fahasoavan’Andriamanitra amin’ny alalan’ny fananganan-janaka. Ny fiainan’ny kristiana dia voamariky ny vokatry ny Fanahy Masina. (Romana 10,9-13; Galatianina 2,20; John 3,5-7; marika 8,34; John 1,12- enina ambin'ny folo; 3,16-17; Romana 5,1; 8,9; Jaona 13,35; Galatianina 5,22-23)
Inona no dikan'ny hoe zanak'Andriamanitra?
Ny mpianatr’i Jesosy indraindray dia mety ho olona ambony. Indray mandeha izy ireo dia nanontany an’i Jesosy hoe: Iza no heverinao fa lehibe indrindra amin’ny fanjakan’ny lanitra? (Matio 18,1). Raha lazaina amin’ny teny hafa: Inona no toetra manokana tian’Andriamanitra ho hita eo amin’ny vahoakany, inona no ohatra hitany fa tsara indrindra?
Fanontaniana tsara. Noraisin'i Jesosy izany mba hanazavana mazava ny hevitra iray lehibe: "Raha tsy mibebaka ianareo ka tonga tahaka ny zaza, dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra" (and. 3).
Tsy maintsy ho gaga ny mpianatra, raha tsy sahiran-tsaina. Angamba izy ireo nieritreritra olona toa an’i Elia izay niantso afo avy any an-danitra handevona ny fahavalo sasany, na zotom-po toa an’i Finehasa izay namono olona izay nandika ny lalàn’i Mosesy (4. Mosesy 25,7-8e). Moa ve izy ireo tsy anisan’ireo lehibe indrindra teo amin’ny tantaran’ny vahoakan’Andriamanitra?
Fa ny heviny momba ny habe dia mifantoka amin'ny soatoavina diso. Nasehon'i Jesosy fa tsy te hampiseho ny olona na tsy hanao herim-po eo amin'ny vahoakany Andriamanitra, fa ny endri-javatra mety hahitana ny ankizy. Azo antoka fa raha tsy ho tonga toy ny ankizy ianao, dia tsy hiditra any amin'ny sehatra mihitsy!
Amin’ny fifandraisana manao ahoana no tokony hitovy amin’ny ankizy? Tokony ho tsy matotra, tia zaza, tsy mahalala? Tsia, tokony ho nandao ny lalan-jaza isika taloha (1. Korintiana 13,11). Tokony ho nanary ny toetran-jaza sasany isika, fa nitazona ny hafa.
Iray amin'ireo toetra ilaintsika ny fanetren-tena, araka ny voalazan'i Jesosy ao amin'ny Matio 18: 4: "Na iza na iza manetry ny tenany tahaka an'io zaza io, dia izy no lehibe indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra." Araka ny hevitr’Andriamanitra, ny olona manetry tena no lehibe indrindra - ny ohatra nomeny no tsara indrindra eo imason’Andriamanitra izay tiany ho hita eo amin’ny olony.
Manana antony tsara; satria toetran'Andriamanitra ny fanetren-tena. Vonona ny hanome ny tombontsoany ho famonjena antsika Andriamanitra. Ny zavatra nataon'i Jesosy fony izy tonga nofo dia tsy anomitran'ny toetran'Andriamanitra, fa fanambarana amin'ny maha-maharitra maharitra an'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra ho tonga toa an'i Kristy isika, vonona hamoy ny tombontsoa manompo ny hafa.
Ny ankizy sasany manetry tena, ny hafa tsy. Jesosy dia nampiasa ankizy iray manokana mba hanazavana hevitra iray: tokony hanao zavatra tahaka ny ankizy amin'ny fomba sasany isika - indrindra amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra.
Nohazavain'i Jesosy ihany koa fa amin'ny maha-zaza dia tokony hitondra ny ankizy hafa amin'ny fitiavana izy (and.5), izay azo antoka fa nidika fa ny zaza sy ny ankizy dia tena ara-bakiteny no heviny ara-panoharana. Amin'ny maha olon-dehibe antsika dia tokony hitondrantsika fanajana sy fanajana ny tanora. Toy izany koa, tokony handray am-panajana sy am-panajana ireo mpino vaovao isika izay mbola tsy matotra amin'ny fifandraisany amin'Andriamanitra sy amin'ny fahatakarany ny fotopampianarana Kristiana. Ny fanetren-tenantsika dia miitatra tsy amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ihany, fa amin'ny olon-kafa koa.
Fantatr’i Jesosy fa nanana fifandraisana miavaka tamin’Andriamanitra izy. Izy ihany no nahalala tsara an’ilay rainy ka afaka nanambara azy tamin’ny hafa (Mat 11,27). Niresaka tamin’Andriamanitra tamin’ny teny aramianina hoe Abba i Jesosy. Mifanaraka amin'ny teny ankehitriny hoe "papa" izany. Tao amin’ny vavaka, i Jesosy dia niresaka tamin’ny papany, nangataka fanampiana taminy ary nisaotra azy noho ny fanomezany. Mampianatra antsika i Jesosy fa tsy ilaina ny mandoka ho an’ny mpanjaka. Dadanay izy. Afaka miresaka aminy izahay satria dadanay izy. Nomeny antsika izany tombontsoa izany. Izany no mahatonga antsika hatoky fa hihaino antsika izy.
Na dia tsy zanak’Andriamanitra toa an’i Jesosy aza isika, dia nampianatra ny mpianany hivavaka amin’Andriamanitra amin’ny maha-dada azy i Jesosy. Taona maro tatỳ aoriana, dia nihevitra i Paoly fa ny fiangonana tany Roma, izay arivo kilaometatra mahery avy amin’ireo faritra miteny aramianina, dia afaka miantso an’Andriamanitra amin’ny teny aramianina hoe Abba (Rom). 8,15).
Tsy ilaina ny fampiasana ny teny abba ao anatin'ny vavaka anio. Fa ny fampielezana ny teny tao am-piangonana voalohany dia mampiseho fa nahaliana ny mpianatra izany. Nahazo fifandraisana akaiky sy amin'Andriamanitra izy ireo, fifandraisana izay manome antoka azy ireo hidirana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy.
Manokana ny teny hoe abba. Ny Jiosy hafa dia tsy nivavaka toy izany. Fa ny mpianatr'i Jesosy no nanao an'io. Fantatr'izy ireo ho Andriamanitra ny dadany. Zanaky ny mpanjaka izy ireo, fa tsy mpikambana ao amin'ny firenena voafidy fotsiny.
Fanerenana ary fananganan'anaka
Ny fampiasana metaphora isan-karazany dia nanohana ny apôstôly hanambarana ny fiarahamonina vaovao izay ananan'ny mpino an'Andriamanitra. Ny teny hoe famonjena dia nitondra ilay hevitra hoe ho lasa fananan'Andriamanitra isika. Avotra amin'ny vidin'ny andevon'ny ota isika amin'ny vidiny lehibe - ny fahafatesan'i Jesosy Kristy. Ny “loka” dia tsy nomena ho an'ny olona iray manokana, fa midika izany fa lafo be ny famonjena antsika.
Ilay teny hoe fampihavanana dia nanantitrantitra fa fahavalon'Andriamanitra taloha isika ary namerina amin'ny laoniny indray tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny fisakaizana. Ny fahafatesany dia namela ny fanesorana ireo fahotana izay manasaraka antsika amin'Andriamanitra amin'ny tsy soratantsika ny ota. Nanao an'izany ho antsika Andriamanitra fa tsy afaka nanao izany ho an'ny tenantsika isika.
Avy eo ny Baiboly dia manome fitoviana maromaro. Saingy ny zava-misy fa ny analogie samy hafa ampiasaina dia mitarika antsika amin'ny fanatsoahana hevitra fa tsy misy amin'izy ireo irery afaka manome antsika ny sary feno. Marina indrindra izany ho an'ireo fitoviana roa izay mifanohitra amin'ny tsirairay: ny voalohany dia mampiseho fa naterak'Andriamanitra isika avy any ambony ary ny iray izay nitaizana antsika.
Ireo analogie roa ireo dia mampiseho zavatra manan-danja momba ny famonjena antsika. Ny fahaterahana indray dia midika fa misy fiovana radika amin'ny maha-olombelona antsika, fanovana izay manomboka kely ary mitombo mandritry ny fiainantsika. Zavaboary vaovao isika, olom-baovao miaina amin'ny vanimpotoana vaovao.
Ny Adoption dia midika hoe lasa teratany tany amin'ny fanjakana isika ankehitriny, nefa efa nambaran'Andriamanitra ho zanak'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanapahan-kevitr'Andriamanitra ary miaraka amin'ny fanampian'ny Fanahy Masina ary manana zo feno handova sy momba antsika. Isika efa lavitra, dia nohatonina tamin'ny alàlan'i Jesosy Kristy famonjena. Maty ao aminy isika, nefa tsy mila maty isika noho izy. Mipetraka ao aminy isika, saingy tsy isika no miaina fa olom-baovao isika izay noforonin'ny Fanahin'Andriamanitra.
Ny metafora tsirairay dia manana ny dikany, fa koa ireo teboka malemy. Tsy misy na inona na inona ao amin'ny tontolo ara-batana izay afaka mampita tanteraka an'izay ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Miaraka amin'ny alalany nomeny antsika, ny sarin'ny Baiboly zanak'Andriamanitra dia ekena manokana.
Ahoana no ahalasan'ny ankizy
Andriamanitra mpamorona, mpamatsy ary mpanjaka. Fa ny tena zava-dehibe kokoa amiko dia ny hoe dadany. Izy io dia fatorana akaiky izay aseho amin'ny fifandraisana lehibe indrindra amin'ny kolontsaina tamin'ny taonjato voalohany.
Ny olon'ny fiarahamonina tamin'izany fotoana izany dia nanjary fantatra tamin'ny alàlan'ny rainy. Mety ho i Joseph, zanak’i Eli, ohatra, ny anaranao. Ho raisin'ny rainao amin'ny toerana misy anao ny fiaraha-monina. Ny rainao dia efa nanapa-kevitra ny satan'ny toekarena, ny asanao, ny vadinao amin'ny ho avy. Izay rehetra nolovanao dia ho avy amin'ny rainao.
Ny reny dia mandray ny anjara andraikitra lehibe kokoa eo amin'ny fiaraha-monina ankehitriny. Betsaka ny olona ankehitriny manana fifandraisana tsara amin'ny reniny noho ny rainy. Raha voasoratra ny Baiboly ankehitriny, dia azo antoka fa handray an-tanana koa ny fanoharana amin'ny reny. Saingy tamin'ny andron'ny Baiboly, ny fanoharana ara-peterna dia zava-dehibe kokoa.
Andriamanitra, izay manambara indraindray ny toetra momba ny reny, dia miantso ny tenany ho ray foana. Raha tsara ny fifandraisantsika amin'ny raintsika eto an-tany, dia mandeha tsara ilay analogie. Raha manana fifandraisana ratsy amin'ny dadanay anefa isika, dia sarotra kokoa aminy hoe inona no ezahahin'Andriamanitra ampanazava amintsika momba ny fifandraisantsika aminy.
Tsy mendrika ny fitsarana isika fa tsy tsara noho ny raintsika eto an-tany. Fa angamba mety ho ampy famoronana isika hanao sary an-tsaina ny fifandraisana mifanaraka amin'ny ray aman-dreny izay tsy ho tratran'ny olombelona mihitsy. Tsara noho Andriamanitra tsara indrindra Andriamanitra.
Ahoana no maha-zanak'Andriamanitra antsika miandrandra an'Andriamanitra ho raintsika?
Lalina ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Manao sorona izy mba hahomby antsika. Noforoniny ho tahaka ny endriny izy ary te hahita antsika ho tanteraka. Matetika, amin'ny maha-ray aman-dreny antsika, dia tsy tsapantsika akory hoe tokony hankasitraka ny ray aman-drenintsika isika noho ny zavatra rehetra nataony. Amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia tsy hahatsapa afa-tsy ny mandresy izay zavatra halehany isika.
Miantehitra tanteraka aminy isika amin'ny hoavy. Ny fananantsika manokana tsy ampy. Matoky azy izahay hikarakara ny zavatra ilainay ary hanome tari-dalana ho an'ny fiainantsika.
Mahafaly antsika isan'andro ny fiarovana satria fantatray fa Andriamanitra Mahery indrindra no mikarakara antsika. Fantany ny zavatra ilainay, na mofo izany na fanampiana isan'andro amin'ny tranga maika. Tsy mila
manahy be satria hikarakara antsika i dada.
Amin'ny maha zanaka antsika, dia mahazo antoka isika amin'ny ho avy ao amin'ny Fanjakan'Andriamanitra. Raha hampiasa fampitoviana hafa: amin'ny mpandova, dia hanana harena tsy ampoizina isika ary honina ao amin'ny tanàna iray izay hitombo betsaka ny volamena toy ny vovoka. Hanana harena sarobidy lehibe lavitra noho ny zavatra fantatsika isika ankehitriny eo.
Manana toky sy herim-po isika. Afaka mitory tsy miangatra isika raha tsy matahotra fanenjehana. Na hovonoina aza isika, dia tsy matahotra; satria manana dadanay isika ka tsy misy misy manaisotra aminay.
Afaka miatrika ny fitsapana misy antsika amin’ny fanantenana isika. Fantatsika fa avelan'ny dadanay hisy fahasahiranana hitaiza anay, mba hahavitanay tsara kokoa amin'ny farany2,5-11). Matoky isika fa hiasa eo amin’ny fiainantsika izany, ka tsy holavina amintsika.
Fitahiana lehibe ireo. Angamba afaka mieritreritra zavatra hafa ianao. Azoko antoka anefa fa tsy misy zavatra tsara kokoa noho izao zanak'Andriamanitra izao. Izany no fitahiana lehibe indrindra amin'ny Fanjakan'Andriamanitra. Rehefa tonga tahaka ny ankizy kely isika dia lasa mpandova ny fifaliana rehetra sy ireo fitahiana rehetra an'ny Bokin'i Môrmôna
ny fanjakan 'Andriamanitra mandrakizay izay tsy azo hozongozonina.